Lọ ọrụ igwe - China Weight Manufacturers, Suppliers
Mmezi arọ OIML KLASS E1 cylindrical udi, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Enwere ike iji igwe E1 mee ihe dị ka ọkọlọtọ ntụle na ịkọwapụta ibu ndị ọzọ nke E2, F1, F2 wdg, ma dabara adaba maka ịkọwapụta usoro nyocha dị elu na oke nkenke dị elu.Ọzọkwa maka akpịrịkpa, nhazi ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ na-eri ihe si na Laboratories, Pharmaceutical Lọ ọrụ, Scales Factory, wdg
Mmezi arọ OIML KLASS F1 cylindrical, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Enwere ike iji F1 mee ihe dị ka ọkọlọtọ maka ịkọwapụta ihe ndị ọzọ dị na F2, M1 wdg, ma dabara adaba maka ịkọwapụta ngwa ngwa nyocha na nkenke nha nha. Ọzọkwa mmezi maka akpịrịkpa, nha ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ na-eri nri site na ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nha, wdg.
Mmezi arọ OIML KLASS M1 cylindrical, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Enwere ike iji igwe igwe M1 mee ihe dị ka ọkọlọtọ maka ịkọwapụta igwe ndị ọzọ nke M2, M3 wdg.
Mmezi arọ OIML KLASS F2 cylindrical, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Enwere ike iji F2 mee ihe dị ka ọkọlọtọ maka ịkọwapụta ibu ndị ọzọ nke M1, M2 wdg. Ọzọkwa mmezi maka akpịrịkpa, nha ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ na-eri nri site na ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nha, wdg.
Mmezi arọ OIML KLASS E2 cylindrical, egbu maramara igwe anaghị agba nchara
Enwere ike iji igwe E2 mee ihe dị ka ọkọlọtọ maka ịkọwapụta ihe ndị ọzọ dị na F1, F2 wdg, ma dabara adaba maka ịkọwapụta usoro nyocha dị elu na oke nkenke dị oke. Ọzọkwa Calibration for scales, balances or other weight weight products from Laboratories, Pharmaceutical Factory, Scales Orieslọ ọrụ, wdg
ASTM onye mmezi arọ 500g ka 50kg akụkụ anọ udi
All igwe na-mere nke adịchaghị igwe anaghị agba nchara na-eme ka ha corrosion eguzogide.
A na-ahazi monobloc dị iche iche maka nkwụsi ike ogologo oge, yana igwe nwere oghere na-agbanwe agbanwe na-enye uru kacha mma maka ego.
Electrolytic polishing ana achi achi kenkowaputa ebupụta maka mgbochi adhesion utịp.
ASTM ibu 1 n'arọ -5kg tent na-ọnọ na mma, inogide, elu mma, patented aluminum igbe na-echebe polyethylene ụfụfụ na
A na-edozi ASTM dị iche iche dị iche iche iji zute klas 0, klas 1, klas 2, klas 3, klas 4, klas 5, klas 6, klas 7.
Igbe Aluminium emeputara uzo di oke nma na bumpers nke eji echekwa ihe di iche iche n'uzo siri ike.
Ọrụ dị arọ CAST-IRON M1 dị 500kg na 5000 n'arọ (Ntugharị ala)
Ihe nkedo Calibration anyị niile na-agbaso iwu nke International Organization of Legal Metrology na ụkpụrụ ASTM maka Class M1 to M3 cast -iron.
Mgbe achọrọ ka a nye gị asambodo nọọrọ onwe ya n'okpuru nzere ntozu ọ bụla.
A na-enye Bar ma ọ bụ Ngwá Ọrụ Aka arụchapụrụ na Matt Matt Etch Primer dị elu ma mee ka ọ dị iche iche nke ị nwere ike ịlele na eserese anyị.
A na-enye Akwụ A na-arụcha nke dịcha mma Matt Black Etch Primer na r Weights
ASTM nhazi usoro (1 mg-1 n'arọ) udi cylindrical
ASTM SS ulo oru nkedo / furu efu wax mgbatị ụdị ule igwe akụkụ anọ udi 500g ka 20kg
Slotted CAST-IRON M1 dị arọ 1 g na 50 n'arọ
ASTM nhazi usoro (1 mg-2 n'arọ) udi cylindrical
ASTM igwe anaghị agba nchara akpu ukpụhọde ukpụhọde ule ibu 1g-20kg
Mmezi arọ N'ihi Digital Akara, Akwụkwọ Akara Asambodo, Akara Calibration Weight, Mmezi arọ Set, Shear Bead Ibu Ibu, Mmezi Mass,